Brazing Brass Fittings Nekudzivirira Kuchengetedza Zvishandiso
Chinangwa: Kupisa shavha tubing magungano kusvika ku 750 ° C nokuda kwekushanda kwekushanda. Iyo yakakura yakakura kubva pa 3 kusvika ku 8 inches (76.2 kusvika 203.2 mm)
Nyaya: Brass tubing Brass flange Braze rings Braze flux
Kutya: 1382 ° F (750 ° C)
Zvishandiso DW-UHF-20KW, 150-500 kHz inotengesa kupisa simba, yakagadzirirwa nechiteshi chemasikati chakasara ane masere 1.0 μF (total 2.0 μF). A multi-turn helic coil induction heat coil yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa zvakananga kwekushanda.
Nzira Izvo zvikamu hazvina kuparadzaniswa. Kubatanidza kwose kunoshambidzwa uye kubhururuka kunoshandiswa kune yese yechando. Usati waunganidza zvikamu zve induction coil inodonha pamusoro pe tube. Iko kusungirirwa chendarira kunoiswa pamusoro pebhandi tubes. Iyo kubuda kune zvikamu kunobvumirwa kuomeswa vasati vapisa. Iko kushandiswa kwemhepo inopisa kunoshandiswa kusvikira bhururu ichiyerera zvakanaka pamubatanidzwa. Gungano rinopisa zvakanaka kusvika ku 1382 ° F (750 ° C) uye inosungiridza bhanze yebhanhire kumativi ose e tube. Kupisa nguva yakawanda maminitsi zvichienderana nehupamhi hwemakumbo.
Migumisiro / Kubatsira Koiri inobvumira kupisa pahutano hwakanakisisa hunoita kuti kuderedza nguva yekufamba uye kupiswa kunopfurikidza nematope endarira.
Categories Technologies Tags Brazing Brass Fittings Nokunyengedza, High Frequency Brazing brass, kuburitswa kuburitsa mhangura, Induction Brazing Brass pipe, Magnetic brazing copper fittings, RF kutengesa bhandi yendarira Post navigation